ခှေးနဲ့ ပုံကွောငျ့ ဝဖေနျခံနရေတဲ့ ဒမျမီရိုဈဈ - XYZ NEWS
အသကျ (၂၃)နှဈပဲရှိသေးတဲ့ ဗွိတိနျ မျောဒယျမလေး ဒမျမီရိုဈဈ ကတော့ အရမျးကို လှပတဲ့ ကောကျကွောငျး လှလှကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေး ဖွဈပါတယျ။
ဆကျစီ ကတြဲ့ ပုံတှကေို မကွာခဏ တငျလရှေိ့တဲ့ သူမရဲ့ IG မှာဆိုရငျ (7.1m followers) ရှိုပွီး နာမညျကွီး IG Star တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျးခတျဟောဈ့ဟောဈ့ပုံတှတေငျတဲ့သူမကတော့ ဒီတဈခါမှာ ဆကျစီ ကကြ ခှေးကြောငျးနတေဲ့ ပုံလေးတှေ ထှကျပျေါ လာခဲ့ပါတယျ။
ခှေးနဲ့ အတူလမျးလြှောကျ ထှကျလာပမေယျ့ သာမနျပုံစံမြိုးလမျးလြှောကျထှကျလာတာမဟုတျဘဲ မိနျးမဆနျဆနျ ဆကျစီကကြ ဝတျစား ပွီး ထှ ကျပျေါ လာခဲ့တာပါ။ အဖွူနဲ့ အနကျရောထားတဲ့ ဝတျစုံဖွဈပွီးအပျေါ ဝတျစုံနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အနကျရောငျ ဒေါကျ ဖိနပျ ကို စီးပွီး သူမရဲ့ အခဈြတျော ခှေးလေး Teddy နဲ့ လနျဒနျမွို့ထဲမှာရှိတဲ့ Seattle Gold လကျဝတျရတနာဆိုငျကို အတူလမျးလြှောကျ ထှကျတာပါ။
ဆိုငျမှာတော့ Demi တဈယောကျ ရှနေဲ့ စိနျရောထားတဲ့ လညျဆှဲကို စမျးဝတျကွညျ့ခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ လညျ ဆှဲ အပျေါ မှာတော့ သူမရဲ့ နာမညျကို ရေးထိုး ထားပါတယျ။ဆိုငျအကူတဈယောကျက သူမရဲ့ လညျပငျးကို ဝတျပေး ခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဆိုငျထဲကစိတျ ကနြေပျ သှားတဲ့ မကျြနှာ အမူအရာနဲ့ ခှေးလေး Teddy ကို ခြီပွီး ထှကျလာ တာကိုတှရေ့ပါတယျ။
ဒီလိုပုံကို သူရဲ့ IG အကောငျ့မှာတငျခဲ့တဲ့အတှကျ ဝဖေနျမူ့တှမြေားသှားခဲ့ပါတယျ။ တခြို့ကတော့ ဒီလောကျ အရမျး ဆကျဆီကတြာမဝတျသငျ့ဘူး။ ဒီလိုမလုပျသငျ့ဘူး စသညျဖွဈပေါ့. ဒမျမီရိုဈဈကတော့ ဒါတှကေို ဂရုမဆိုကျတဲ့အပွငျ ဘာမှပွနျမပွောပါဘူး။
ခွေးနဲ့ ပုံကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဒမ်မီရိုစ်စ်
အသက် (၂၃)နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ဗြိတိန် မော်ဒယ်မလေး ဒမ်မီရိုစ်စ် ကတော့ အရမ်းကို လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်း လှလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စီ ကျတဲ့ ပုံတွေကို မကြာခဏ တင်လေ့ရှိတဲ့ သူမရဲ့ IG မှာဆိုရင် (7.1m followers) ရှိုပြီး နာမည်ကြီး IG Star တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းခတ်ဟောစ့်ဟောစ့်ပုံတွေတင်တဲ့သူမကတော့ ဒီတစ်ခါမှာ ဆက်စီ ကျကျ ခွေးကျောင်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။
ခွေးနဲ့ အတူလမ်းလျှောက် ထွက်လာပေမယ့် သာမန်ပုံစံမျိုးလမ်းလျှောက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘဲ မိန်းမဆန်ဆန် ဆက်စီကျကျ ၀တ်စား ပြီး ထွ က်ပေါ် လာခဲ့တာပါ။ အဖြူနဲ့ အနက်ရောထားတဲ့ ၀တ်စုံဖြစ်ပြီးအပေါ် ၀တ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အနက်ရောင် ဒေါက် ဖိနပ် ကို စီးပြီး သူမရဲ့ အချစ်တော် ခွေးလေး Teddy နဲ့ လန်ဒန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ Seattle Gold လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်ကို အတူလမ်းလျှောက် ထွက်တာပါ။
ဒီလိုပုံကို သူရဲ့ IG အကောင့်မှာတင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်မူ့တွေများသွားခဲ့ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီလောက် အရမ်း ဆက်ဆီကျတာမ၀တ်သင့်ဘူး။ ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး စသည်ဖြစ်ပေါ့. ဒမ်မီရိုစ်စ်ကတော့ ဒါတွေကို ဂရုမဆိုက်တဲ့အပြင် ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။
ဆိုင်မှာတော့ Demi တစ်ယောက် ရွှေနဲ့ စိန်ရောထားတဲ့ လည်ဆွဲကို စမ်းဝတ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ လည် ဆွဲ အပေါ် မှာတော့ သူမရဲ့ နာမည်ကို ရေးထိုး ထားပါတယ်။ဆိုင်အကူတစ်ယောက်က သူမရဲ့ လည်ပင်းကို ၀တ်ပေး ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုင်ထဲကစိတ် ကျေနပ် သွားတဲ့ မျက်နှာ အမူအရာနဲ့ ခွေးလေး Teddy ကို ချီပြီး ထွက်လာ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
သူမဟာ Kylie Jenner နဲ့ တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ အမေရိကန် Hip Hop အဆိုတေ်ာ Tyga ရဲ့ Ex ပါ။ Demi Rose တစ်ယောက် ဒီတစ်ပတ် အစောပိုင်းတုန်းက Ibiza မြို့မှာ swimwear shoot အတွက် အဖြူရောင် Thong ကို ၀တ်ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Writer : Min Thu (XYZ News)
ပါကစ်စတနျ ကကျရျှမီးယားဒသေတှငျ နှငျးထုပွိုကပြွီး ၅၇ ဦးထကျ မနညျးသဆေုံး
တဈကမ်ဘာလုံးသို့ ဝူဟနျအဆုတျယောငျ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပြံ့နှံ့နိုငျ